Maxay tahay sababta Ra'iisul Wasaare Rooble uga baaqsaday xafladii sagootin - Home somali news leader
Home NEWS Maxay tahay sababta Ra’iisul Wasaare Rooble uga baaqsaday xafladii sagootin
Maxay tahay sababta Ra’iisul Wasaare Rooble uga baaqsaday xafladii sagootin
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay ka baaqsaday xaflad sagootin aheyd oo xalay isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay Xarunta Madaxtooyada Garowe.
Xafladan oo aheyd casho ayuu Ra’iisul Wasaaraha si layaab ah leh u diiday inuu ka qeyb galo, iyadoo taa bedelkeed uu kormeero ku sameeyay goobaha bulshada isugu timaada iyo goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada Garowe.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa la sheegay in sababta uu uga baaqsaday xaflda ay la xiriirto is mari waaga isaga iyo Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ee ku saabsanaa wada hadaladii looga hadlayay arrimaha doorashada.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxtooyada Garowe ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha uu ka carooday hadal uu ku yiri Madaxweyne Deni oo ahaa inuu isaga yahay farriin side, balse uu shir isugu yeero Madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda Federaalka, si looga hadlo arrimaha taagan.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa la filayaa inay maanta ka ka soo ambabaxaan magaalada Garowe, isla markaana ay soo gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Previous article“External source” caused an explosion of oil tankers near Saudi Arabia, the owner said
Next articleMahad Salaad ” Caro iyo Cunto la diido kuma jirto casharada siyaasada Soomaaliya”